A man carries a street sign as opposition party supporters clash with police in Harare. ( Image Source )
Police fired tear gas and beat protesters who responded by throwing stones in Zimbabwe's capital Harare on Friday in the latest of a string of highly charged demonstrations.
Mugabe's opponents have become emboldened by rising public anger and protests over an economic meltdown, cash shortages and high unemployment.
People flee teargas as opposition party supporters clash with police in Harare, Zimbabwe.
Zimbabwean police fired tear gas and water cannons at opposition leaders and hundreds of demonstrators before unrest swept across large parts of the capital Harare.
Zimbabwe opposition party leader Morgan Tsvangirai gestures during a press briefing in Harare.